नेपाल आज | चिनियाँ कार्यदलको निस्कर्षः नेपालमा कुनै एक दलसँग भर पर्ने अवस्था छैन
चिनियाँ कार्यदलको निस्कर्षः नेपालमा कुनै एक दलसँग भर पर्ने अवस्था छैन
शनिबार, १८ पुष २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्थाको मूल्यांकन तथा नेकपालाई एक गर्ने कार्यादेशसहित नेपाल आएको चिनियाँ राजनीतिक कार्यदलले नेपाल सम्बन्धी रिपोर्ट राष्ट्रपति सि चिनफिङको कार्यालयलाई बुझाएको छ ।
टोलीले नेपालमा कुनै एक दलसँग भर पर्ने अवस्था छैन भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बुझिएको छ । सीपीसीका उपमन्त्री नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदल चार दिने भ्रमण सकेर बुधबार बेइजिङ फर्केको थियो । टोली फर्केपछि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको धारणा पनि लिएको थियो । टोलीले नेपालभित्रको राजनीतिक समस्या र त्यसको समाधानका पाटो बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।
टोलीले भ्रमणका क्रममा सत्तारुढ दलका दुवै खेमाका नेताहरूसँग घर घरै पुगेर भेटेका थिए । टोलीले सत्तारुढको दुई खेमाबाहेक प्रमुख प्रतिपक्ष दल अन्य प्रतिपक्ष दलका नेताहरूलाई पनि भेटेका थिए ।
टोलीले आएकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए । नेपालमा रहँदा नेकपाका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटेका वार्ता गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई लगायत अन्य नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता भएको थियो।
उनीहरूले अन्य दलका नेतासँग भेट गर्दा चिनियाँले सबै दलसँग उत्तिकै सम्पर्क राख्ने उल्लेख गरेको थिए । तर नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुन नसकेको विषयमा निकै चिन्तित चिनियाँ नेतृत्वले राष्ट्र हितमा काम गर्न पर्ने बताएका थिए ।
नेपाली नेतृत्वले मुलुक भन्दा व्यक्तिगत हित हेरेको विषयमा पनि घुमाउरो शैलीमा धारणा राखेका थिए । पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराईले पनि उक्त टोलीले निकै गम्भीर रुपमा छलफल गरेको बताउँदै भने, ‘चीन यतिबेला ‘उल्फ वारियर डिप्लोम्यासी’ अन्र्तगत रहेर अतिरिक्त सक्रिय हुँदै आएको छ । यसलाईक नेपालका नेतृत्वले सामान्य रुपमा लिन हुँदैन ।’
उच्चस्तरीय टोलीले दुई मुलुकका दलबीच अन्तरक्रिया, बीआरआई अन्तर्गतको सहयोग र आपसी चासोका विषयमा छलफल गरेको थियो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विहिबार भनेका थिए, ‘दुई मुुलुकको परम्परागत मित्रतालाई थप प्रगाढ बनाउन, पार्टीहरूबीच सहयोग आदान–प्रदानलाई अझ बलियो बनाउने, बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउने विषयमा छलफल भयो ।’
विभाजनका लागि पूर्णतः तयार अवस्थामा रहेका नेकपाको एकता कायम राख्न चीनले अन्तिम प्रयास गरेको थियो । त्यसकै लागि चिनियाँ टोली नेपाल आएको पुष्टि भइसकेको छ । उपमन्त्री गुओले नेकपाको विभाजन रोक्न कुनै सम्भावना बाँकी छ कि भनेर सोधेको विषय पनि आफैँमा चर्चित भएको थियो । दुई खेमामा चिरा परेका नेकपा अझै पनि कुनै मिलनविन्दु हुन सक्छ कि सक्दैन भनी जिज्ञासा नेकपाबाट बाहिर आएको थियो ।